Faa'iidooyinka iyo siyaabaha loo mariyo midabka astaantaada gaarka ah | Abuurista khadka tooska ah
Faa'iidooyinka iyo siyaabaha loo mariyo midabka astaantaada gaarka ah
Jorge Neira | | Waraaqaha midabaynta, Khayraadka
Inaad wanaag haysato mooyee qalabka garaafka iyo ilaha Si loo abuuro sawirro, sawir-gacmeedyo, naqshado iyo goobo gaar ah, mid ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee xirfadle kasta oo suuq geynaya ama naqshadeeye muuqaal ah ay tahay inuu sameeyo waa in la ogaado sida saxda ah ee loo isticmaalayo midabka.
Markaad isticmaaleyso wax ka duwan isku dhafka midabka, xeeladaha suuqgeynta waa la xoojin karaa, maxaa yeelay adeegsiga midabbo kala duwan waxay kordhisaa aqoonsiga 80% inaad yeelan karto sumad shaqsiyeed, taas oo dedejineysa howlaha meeleynta astaantaada maskaxda macaamiisha.
1 Midab sawirka shirkadda iyo faa'iidooyinkiisa
1.1 Waxay u kala duwan tahay sida loo arko
1.2 Waa inay la xiriirtaa shakhsiyadda astaanta
1.3 Macnahu wuu isbadali karaa iyadoo kuxiran tirada
1.4 Micnaha midabada
Midab sawirka shirkadda iyo faa'iidooyinkiisa
Faa'iidooyin badan ayaa laga heli karaa isticmaalka saxda ah ee codka, maxaa yeelay iyada oo loo marayo tan waa suurtagal in la daboolo saddex cunsur oo lagama maarmaan u ah guusha ganacsiga, kuwaas oo:
Gudbinta shucuurta iyada oo loo marayo saameyn muuqaal ah.
La mid ahaanshaha bartilmaameedka macmiilka.
Hadda, ka hor intaanan adiga kaala hadlin midabada iyo macnaha mid walba, waxaan ka hadli doonaa dhowr arrimood oo muhiim ah si loo fahmo sida muuqaalka shirkadu shaqsi loogu noqon karo iyadoo la adeegsanayo midabka:
Waxay u kala duwan tahay sida loo arko
Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo in midabada leeyihiin macno gaar ah, waxay kuxirantahay arima kala duwan oo dibada ah, kuwaas oo mas'uul ka ah sameynta dadka aragtida saameynta muuqaalka gebi ahaanba ka duwan.
Qaar ka mid ah arrimahan dibedda ayaa beddelaya aragtida, iyadoo kuxiran shaqsiga oo badanaa: dookhyada bulshada iyo dhadhanka, macnaha guud ee dhaqanka, isbeddellada, iyo xitaa saamaynta jir ahaaneed.
Waa inay la xiriirtaa shakhsiyadda astaanta
Hadaad rabto sawirka shirkadaada gudbiyaan shakhsiyadda astaanta, waxaa lagama maarmaan ah in midabka aad u isticmaasho labada shirkadood iyo naqshadaha dhiirrigelinta ay si uun ula xiriiraan shakhsiyadda shirkadda, waxay noqon kartaa dhadhanka dhagaystayaasha bartilmaameedka ah iyo / ama qaybta ay ku taal.
Midab ahaan waxaad gudbin kartaa qiyam kala duwan Xitaa waad ku aqoonsan kartaa macaamiishaada haddii sawirkaaga shirkadeed uu leeyahay astaamo qaar ka duwan kuwa kale.
Macnahu wuu isbadali karaa iyadoo kuxiran tirada
Qiyaasta midabada ayaa sabata iyaga inay ku xirnaadaan noocyo shakhsiyadeed oo kala duwan, badanaa codad xoog lehBadanaa iyagu waa kuwa bixiya muuqaalka shirkadeed oo leh dabeecad aan ku dhiirranayn oo keliya, laakiin sidoo kale cajaa'ib leh.
Tusaalaha ugu fiican ee aan ku siin karno si aad u fahamto ayaa ah inaad qiyaasi karto midab dhalaalaya oo midab leh oo guud ahaan soo gudbinaya sawirradaWaxay gebi ahaanba ka duwan yihiin waxa aad uga fikiri karto midabbada hore ama midabka midabka leh, taas oo keenta degganaansho, is-afgarad iyo degganaan
Qaar ka mid ah xaqiiqooyinka xiisaha leh ee ku saabsan isticmaalka midabka ee sawirrada shirkadaha:
95% shirkaduhu waxay isticmaalaan hal har ama waxay isku daraan laba daah midkoodna.
Midabada ugu xiisaha badan waa buluug, cadaan, cagaar, bunni iyo guduud.
Midabada ugu xiisaha yar ayaa ah: oranji, jaalle iyo madow.
Adiga si aad u doorato midabka saxda ah si aad ugu gudbiso dareenka aad rabto, adiga hoosta waxaan muujineynaa macnaha midabada kala duwan:
White: Loo adeegsaday qaabeynta astaanta astaanta waxay sheegaysaa dambi la’aan iyo fudeyd, sidaa darteed waxaa badanaa loo adeegsadaa ujeeddooyinka carruurta iyo caafimaadka.
Rojo: Badanaa waxaa loo isticmaalaa habkeeda kicinta kicinta, in kastoo sidoo kale loo isticmaalo gudbiyaan jabhad iyo ficil.
Azul: Waxaa loo istcimaalaa astaamaha si loo soo gudbiyo muuqaal wax ku ool ah oo aan caddayn kaliya ahayn, laakiin sidoo kale xoog iyo caqli.
Khafiif: Wuxuu gudbiyaa a dareemid raaxo iyo xarragoSidoo kale waxaa si joogto ah loogu isticmaalaa in lagu xasuusto jacaylka jacaylka.
negro: Badanaa waxaa loo isticmaali jiray in la bixiyo a muuqaal casri ah oo tayo leh, sidaas darteed badanaa waa loo isticmaalaa marka la dhiirrigelinayo alaabada / waxyaabaha raaxada leh.
Adiguna, midabkee ayaad dooran laheyd inaad ku shaqeyso? Xusuusnow tani waa mid ka mid ah howlaha ugu waaweyn in xirfadle kasta oo suuq geynaya ama naqshadeeye jaantus ah uu sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Faa'iidooyinka iyo siyaabaha loo mariyo midabka astaantaada gaarka ah
Isticmaalka plugins si loogu isticmaalo Photoshop
Naqshadeynta naqshadeynta naqshadeynta